MDC Alliance Inoti Motokari dzaVaChamisa Dzatemwa neVatsigiri veZanu-PF Zvasiya Vamwe Vakuvara
Gumiguru 11, 2021
Nelson Chamisa Agenda 2020
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti motokari dzange dzakatakura mutungamiriri waro, VaNelson Chamisa, kwaCharumbira kuMasvingo dzatemwa nevanhu vange vaine mabhemba nematemo vanonzi ndevebato riri kutonga reZanu PF.
Mutauriri webato iri, Advocate Fadzayi Mahere vazivisa pandandemutande ravo reTwiiter kuVaChamisa havana kukuvara muchiitiko ichi kunyange hazvo dzimwe motokari dzavo dzaputswa mahwindo. Hutungamiri hweMDC Alliance kuMasvingo hunoti pane vanhu vane chitsama vaendeswa kuchipatara.
Mutevedzeri waAdvocate Mahere, VaGift Ostallos Siziba, vanoti vange vaine zvirongwa zvavo zveCitizens Convergence for Change apo vatanga kurwisa nenhengo dzeZanu PF.
VaSiziba vaudza Studio 7 kuti zvaitika zviri pachena kuti zvaitwa nhasi hurongwa hweZanu PF hwekuda kudzivirira MDC Alliance kutsvagwa rutsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vaudza Studio 7 Zanu PF haina nguva yekuita mhirizhonga vachiti MDC Alliance iri kubika nyaya nechinangwa chekusvibisa bato ravo pamberi pekushanya kwenhume yeUnited Nations, Amai Alena Douhan, avo vari kuuya svondo rinouuya kuzoongorora kuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakanganisa hupenyu nehupfumi hwenyika sei.
VaMugwadi vati igaro ziva kuti pese panoitika misangano yemasangano akaita seUN kana panoshanya nhume kubva kusangano iri nemamwe, MDC Alliance inotsvaga nzira dzekusvibisa bato ravo nehurumende.
VaMagwadi, vati nhengo dzebato ravo zvikuru sei vechidiki havana nguva yekuita mhirizhonga sezvo vane zvekuita kuminda nemigodhi yavo.
Vachinyorawo pandemutande ravo reTwitter munyori mubazi rezvekuburitwa kwesmashoko, VaNick Mangwana, vatiwo hapana chitsva pane zvinonzi neMDC Alliance zvaitika kwaCharumbira vachiti zvinhu zvinotarisirwa sezvo paine musangano wekushanduka kwemamirire ekunze kweCOP26 pamwe nekushanya kwaAmai Douhan svondo rinouuya.
Asi pane mavhidhiyo ari kutenderera pamadandemutande ari kuratidza vange vachitema motokari dzeMDC Alliance ava vange vakatakura zvinyorwa zvekunyomba VaChamisa vakavhara mugwagwa. VeMDC Alliance vanoti vaunzwa nemotokari dzebato reZanu-PF.
Bepanhau reMasvingo Mirror rinotiwo mapurisa ange akapakatira zvombo arambidza MDC Allinace kuita musangano wayo wedunhu wange Uchida kuitirwa pane imwe imba.
Kunyangwe mamwe mapato ari muPolad neZanu-PF ari kubvumidzwa kuita misangano, bato reMDC Alliance rinoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa nemapurisa nevatsigiri veZanu-PF.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti zvafamba sei kwaCharumbira nhasi sezvo mutauriri wemapurisa vati vange vasati vasumwa zvaitika patataenda pamhepo.